❤️ Otu esi akpọtụrụ ndị na-emetụta ya na Instagram - Winches Club
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọtụrụ ndị nnukwu ụdị na ndị na -emetụta gị na niche gị na Instagram, enwere ụfọdụ ihe ị kwesịrị ịma iji zere ịgba égbè.
Enwere ihe karịrị otu ijeri ndị ọrụ Instagram na -arụ ọrụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta mmekọ a na nnukwu influencer ma ọ bụ akara ama ama, ọ ga -adị mkpa ka ị kwụpụta ma hụ na a nụrụ gị. Instagram bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji jikọọ ụdị ndị ọzọ wee bulie mgbasa ozi mmekọrịta gị na ọnụnọ azụmahịa gị..
Edemede a bụ ụzọ kacha mma ị ga -esi dọta mmasị ndị mmadụ wee mee ka ha nwee ọ andụ na gị na gị ga -arụkọ ọrụ.. Cheta na ụfọdụ n'ime nnukwu akaụntụ Instagram ga -enweta ọtụtụ narị ozi kwa ụbọchị, ya mere ọ dị mkpa ịpụ kwụpụ ha ozugbo.
Kpọtụrụ ụdị na ndị na -emetụta ya na Instagram
Ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ inwe mmetụta na akaụntụ influencer, n'agbanyeghị nha gị ma ọ bụ nha nke ndị a, ị ga -eme ihe ndị a:
Zute ndị ziri ezi – ọ baghị uru iziga ndị na -enweghị mmasị na gị ma ọ bụ ndị na -ekwekọghị na ụdị ika gị na ụdị gị
Wetara ha uru – ọtụtụ ndị mmadụ na -elekwasị anya n'ihe ha na -agbalị ime, kama ilekwasị anya n'otú ha ga -esi nyere onye ha rutere aka
Nabata ọjụjụ – ị ga -eziga ọtụtụ ozi na ọtụtụ n'ime ha ga -atụfu akara ha, yabụ dịrị njikere ịnabata ịjụ
Nwee obi ike – ị ga -anọgide na -eme ya ma ghara ịda mbà, ọbụlagodi na a jụrụ ajụ na amaghị mgbe niile Ugbu a ị nwere echiche bụ isi ka aga -esi aga n'ihu, ka anyị banye na nkọwa.
Icheta Ndị Kwesịrị Ekwesị
Iji nweta nsonaazụ kacha mma, ị ga -enwerịrị akaụntụ ndị metụtara ọdịnaya gị. Anyị bipụtara otu akụkọ n'oge na -adịbeghị anya maka otu esi achọta akaụntụ ọhụrụ ngwa ngwa na niche gị., yabụ gụọ ya ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọtụtụ akaụntụ jikwaa.
I nwekwara ike iji ụzọ ka omimi, na na -achọ hashtag ma ọ bụ ọnọdụ metụtara niche gị na inyocha akaụntụ n'otu n'otu ka ịkpọtụrụ. Ime otú ahụ, gbalịa ka ị ghara ichegbubiga onwe gị ókè banyere ọnụọgụ ndị na -eso ụzọ, mana gbado anya na ọnụego njikọ aka yana ogo ọdịnaya.
Wetara ha uru
Kama iziga ọtụtụ narị Ozi na -arịọ maka otu ihe ahụ, kama gbalịa chọta ụzọ isi bulie ọnụ ahịa akaụntụ a n'ụzọ ọ bụla. Ọ nwere ike ịdị nfe dị ka inye ha ọdịnaya, zitere ha nlele, ma ọ bụ ọbụna nye ha ụdị nkwalite.
Nhọrọ ikpeazụ a nwere ike ịmasị ma ọ bụrụ na ị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na -eso ụzọ ịntanetị na nyiwe ndị ọzọ dị ka webụsaịtị gị ma ọ bụ Facebook., mana ka ị malite na Instagram. Nye ha ihe bara uru karịa naanị ịrịọ ha maka ihe, ma ị nwere ike chọpụta na ihe ndekọ ndị a na -egbo mkpa gị karịa.
Eleghị anya ị ga -eziga ọtụtụ ozi tupu ị banye ebe ọ bụla, a ga -enwekwa ọtụtụ ndị jụrụ ajụ na ọbụna ihe ndị ọzọ leghaara anya. Isi ihe abụghị ka ewere ya n'onwe gị, ị nwere ike ịnata ha n'oge adịghị mma ma ọ bụ, ma ọ bụrụ na ha enweta ọtụtụ ozi, ha nwere ike ha agaghị ahụ onye isi njikwa gị. Gbalịa jiri nọmba were gwuo egwu, ekwekwala ka ịjụ gị metụta gị, ọ ga -ewe obere oge tupu ndị mmadụ amalite ịzaghachi gị.
Ịgbaso ngalaba nke mbụ, ị ga -eziga ọtụtụ ozi na ihe kacha mkpa ị nwere ike ime bụ ịnọ na -eme ihe omume gị. Ị nwere ike izipu ozi 100 tupu mmadụ azaa arịrịọ gị, ma ọ bụ ikekwe ọbụna 1000, mana ọ dịghị mkpa n'ihi na ọ na -eme mgbe niile na njedebe.
Ihe dị mma bụ, nke ahụ bụ ozugbo ị nwetara mmekọ na akpa, ị nwere ike iji ya baara gị uru iji nweta ndị ọzọ. Ị nwere ike ịgwa ndị ahịa gị : “Mụ na onye ahịa a na -arụkọ ọrụ a, Enwere m olileanya na ị ga -etinyekwa aka gị”.
Ọ nwere ike bụrụ nnukwu onye mkparita ụka ma nwee ike ị nweta ọtụtụ mmadụ., kedu ihe nwere ike ịgba bọọlụ na ọrụ netwọkụ gị.
Edemede gara agaNgwa ọchụchọ Hashtag nke Instagram
Akụkọ na-esoteEtu ị ga -esi mara ma ọ bụrụ na mmadụ egbochila gị na Instagram